Kedu ihe kpatara Snapchat ji agbanwe Mgbasa ahịa Dijitalụ | Martech Zone
Thursday, May 19, 2016 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Ismael El-Qudsi
Nọmba ndị ahụ dị egwu. #Snapchat na-etu ọnụ ihe karịrị 100 nde kwa ụbọchị na-arụsi ọrụ ike na ihe karịrị ijeri 10 kwa ụbọchị nlele vidiyo, dị ka kwa data dị n'ime. Netwọk mmekọrịta na-aghọ onye ọkpụkpọ isi n'ọdịnihu nke ahịa dijitalụ.
Kemgbe mmalite ya na 2011 nke a ẹphe netwọk toro n'ike n'ike, ọkachasị n'etiti ụmụ amaala dijitalụ nke naanị ndị ọrụ mkpanaka. Ọ bụ ihu na ihu ihu, nke na-akpachi anya na mgbasa ozi mmekọrịta nwere oke nnabata ọfụma.
Snapchat bụ netwọkụ nke akara ahụ na-achọ onye ọrụ iji zipụ ozi nkeonwe ma kwuo okwu na koodu ọ ghọtara. Ọ bụ netwọkụ rụzuru ihe mgbasa ozi na-agụ agụụ kemgbe afọ 100 gara aga: otu na njikọ.
Ihe ohuru ohuru ya na onyonyo onyonyo na onyonyo ma obu ihe nlere vidiyo nke 10 nke abuo nke ghapuru n’ime oge elekere 24 agbanweela uzo anyi si eji mgbasa ozi ndi mmadu eme ihe ma gbanwee uzo anyi si ekiri vidio - ugbu a n’uzo na mkpanaka. Nke a na-anọchite anya nnukwu ohere maka ndị ahịa na ndị mgbasa ozi. Ọ na-enye ohere bara uru iji mekọrịta ma jikọọ na ndị na-ege gị ntị na ụzọ nke onwe.
Ebe ọ bụ na Snapchat bụ netwọkụ kachasị mma maka ndị na-eto eto, ọ bụkwa ebe a ga-aga iji wee nweta igwe mmadụ igwe mmadụ na-achọsi ike, otu akụkụ nke na-esiwanye ike ịchọta site na ọwa ndị ọzọ.
Taa, 63% nke ndị ọrụ #Snapchat nọ n'agbata 13 na 24 afọ, ka data nyere ụlọ ọrụ. Ọ bụ ezie na ndị na-eto eto nwere ike ọ gaghị enwe akaụntụ ụlọ akụ ma ọ bụ kaadị kredit nke ha, ha na-abụkarị ndị na-emepụta usoro, na-ekpebi ịzụrụ ma na-emetụta mkpebi ndị ahịa nke ndị mụrụ ha.
Gini mere iji tinye Snapchat na usoro ahia gi?
Mepụta mara: Snapchat bụ ụzọ dị mma iji wulite ikpughe maka azụmaahịa gị ma kwupụta ụkpụrụ akara site na ịkọ akụkọ. Mee ka akara ngosi gị dịrị na ndụ ma nye ndị na-ege gị ntị uru nke uru –nkeepee vidiyo eserese iji kesaa nkuzi ngwa ngwa na / ma ọ bụ ndụmọdụ na ngosipụta ngwaahịa, dịka ọmụmaatụ.
Humanize azụmahịa gị: Nghọta bụ ihe dị mkpa iji jikọta ndị ahịa gị na ọkwa dị mma na Snapchat na-enye nke a. Zipu eserese eserese na azụmaahịa gị ma gosipụta ihe ndị a na-eme kwa ụbọchị ndị ahịa anaghị ahụkarị.
Kpalie ndị ahịa: Mee ka ndị ahịa tinye aka ma gbaa ha ume ime ihe. Nye mkpuchi dị ndụ site na otu n'ime ihe omume gị, zoro ezo nyocha nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na-abịa ma gbaa ọsọ na asọmpi.
Etu ị ga - esi nweta akara ngosi Snapchat ziri ezi?
Mgbasa ịre ahịa azụmaahịa nwere ike ịnwe oke oge n'agbanyeghị agbanyeghị usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Iji ebe ahịa influencer bụ isi ihe na-eme ka usoro a dị ọhụrụ iji nyefee ọdịnaya nwere ike ịbawanye na ROI siri ike.
SocialPubli.com, na-eduga ọtụtụ ahịa ahịa influencer, na nso nso ghọrọ ihe mbụ 100% akpaghị aka iji mee ka mmekorita ika-mmetụta na Snapchat.
Ahịa na-enye ihe ngosi mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze na-ewu ewu nke e wuru n'elu ochichi onye kwuo uche nke ika na ikike ịmekọrịta ohere. Ọ bụ oghe nye ndị ọrụ mgbasa ozi ọ bụla ka ha debanye aha ma bido inweta uru site na ọrụ mgbasa ozi ha. Dị, ụlọ ọrụ na obere azụmaahịa nwere ike ịmalite mkpọsa na-enweghị ego kachasị mkpa.
SocialPubli.com jikọtara ụdị nwere ihe karịrị 12,500 ndị na-eme ihe ike sitere na 20 + mba na-eme ka mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi gafee Instagram, Twitter, Youtube, blọọgụ, na ugbu a Snapchat.
Enwere ike ịkekọrịta ndị na-eme ihe site na iji njirisi 25 gụnyere nhọrọ ezubere iche maka ọnọdụ, okike, ebe mmasị, afọ, ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ na ndị ọzọ.
Tags: ahịa ahịaahịa ahịasnapchatsnapchat ndị na-eme iheelekọta mmadụsocialpubligini mere snapchat
Ismael bụ onye isi na SocialPubli.com ebe ọ bụ na mmalite malitere na July 2015. Ọ bụkwa CEO nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ịntanetị, Internet República, ụlọ ọrụ nne na nna nke SocialPubli.com. Ismael na-akụzi na mmemme Master Internet Business (MIB), ESIC na Instituto de Empresa. Achọpụtara ya n'oge na-adịbeghị anya dịka otu n'ime ahịa 50 kachasị elu n'ịntanetị na azụmaahịa
ndị na-eme ihe na Twitter.